Umshini Wefektri Wokudonsa Umshini Wotshani We-Crash Crow Fowil Machine
Umshini wokubuyisa onotshani awukwazi ukwengeza kuphela umanyolo wezinto eziphilayo, uthuthukise ukwakheka kwenhlabathi, ukhuphule ukuvunda kwenhlabathi futhi wenze ngcono ukulungiswa kwe-seedbed ekusakazwayo, kepha futhi ungakugwema ukushiswa kotshani nokungcoliswa kwemvelo.
1. Ochwepheshe ekwakheni nasekuthengiseni umshini wepulazi iminyaka engaphezu kwe-10.
3. Ngokulawulwa kwekhwalithi okuqinile nesevisi enhle kakhulu yamakhasimende.
4. Singanikeza insiza enhle kakhulu futhi esheshayo ngemuva kokuthengisa.
5. Inhloso yethu: Win-win.
6. Singakwazi ukuklama nokukhiqiza imishini ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Amafektri anikezela ngochungechunge lomsakazo wokuqeda i-PTO we-FM
Le mishini yezomnotho ilungele umnikazi ukuthi aphathe izidingo zawo zokulungiswa komhlaba.
Izisiki zokujikeleza zenzelwe insiza ethembekile kanye nokusebenza okulula.
Ukuvikelwa ngokufaka "i-stump-jumper" njengemishini ejwayelekile kanye ne-shear pin PTO driveline.
Insimbi yebanga eliphakeme & i-cut cut blants yempilo ende yokusebenza.
Izinga lomsindo eliphakeme eliphakeme eliphakeme eliphonsa i-iron gearbox.
Amasango agxiliwe angemuva afakwe njengemishini ejwayelekile nenketho egxiliwe ngaphambili ye-chain-Guard.
Powder camera yokuqedela yesikhathi eside nokulungiswa okulula.